Ny filohan'ny Feice Explosion-proof Electric Co., Ltd.
Ny ezaka mafy nataon'ny mpisava lalana nandritra ny taona maro dia nanangana fototra ara-materialy lalina sy lova ara-kolontsain'ny Fice, izay mampiavaka ny Fice amin'ny fifaninanana.Eto aho dia te-hisaotra amin-kitsimpo ireo mpanjifa, ivon-toeram-pamolavolana ary mpiara-miombon'antoka izay mikarakara sy manohana ny fampandrosoana ny Feicer.
Ny fikatsahana ny fahaiza-manao dia ny traikefa tokana an'ny Feice eo amin'ny sehatry ny famokarana herinaratra tsy misy fipoahana.Handova ny hetahetam-pandraharahantsika isika ary hanoratra ny voninahitry ny taonjato!
Ny Feice Explosion-proof Electric Co., Ltd. dia miorina ao Jiaxing, Zhejiang, "toerana nahaterahan'ny Antoko Komonista Shina".Izy io dia mpanamboatra sy mpanome tolotra manokana amin'ny famokarana vokatra elektrônika "Class II" avo lenta-ampiasaina amin'ny alàlan'ny fipoahana sy fitaovana jiro.Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny solika, simika, entona voajanahary, sehatra ivelan'ny morontsiraka, miaramila, famonoana afo, lalamby, seranan-tsambo sy ny saha hafa no laharana amin'ny telo voalohany amin'ny indostria nandritra ny taona maro.
Ny orinasa dia naorina tamin'ny taona 1995 miaraka amin'ny renivohitra voasoratra anarana RMB 301.66 tapitrisa ary nifindra avy any Wenzhou ho any Nanhu District, Jiaxing City, Faritanin'i Zhejiang tamin'ny 2010. Manana tranobe maoderina efa ho 100.000 metatra toradroa izy io, mpiasa maherin'ny 500, anisan'izany ny mihoatra ny 90 teknisianina, ary ny varotra isan-taona mihoatra ny 500 tapitrisa yuan.
Ny orinasa dia nandalo rafitra fitantanana kalitao IS09001, rafitra fitantanana tontolo iainana ISO14001, rafitra fitantanana fandrefesana ISO10012 ary fanamarinana rafitra fitantanana ara-pahasalamana sy fiarovana OHSAS18001.Amin'izany fotoana izany, ny orinasa dia tafiditra tanteraka amin'izao tontolo izao ary nahazo ny Vondrona Eoropeana ATEX, iraisam-pirenena IECEx, Rosiana CU TR ary fanamarinana iraisam-pirenena hafa.Izy no lefitry ny filoha lefitry ny Fikambanan'ny Fitaovam-pitaovana elektrônika an'i Shina ary ny mpikambana ao amin'ny Komitin'ny Teknika Fanamafisana Nasionaly momba ny Fitaovam-pitaovana elektrika porofo mipoaka.
Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasa dia manana vokatra sy teknolojia marobe izay nahazoana patanty 100 eo ho eo amin'ny famolavolana nasionaly sy taratasy fanamarinana patanty modely, nandray anjara tamin'ny famolavolana ny fenitra nasionaly sy indostria 20 mahery, ary nahazo ny "orinasa teknolojia avo lenta". " tamin'ny 2014. Hatramin'ny taona 2000, dia mpamatsy kalitao avo lenta amin'ny Sinopec, PetroChina ary CNOOC izy, ary manana voninahitra ho mpamatsy fitaovana elektrika tsy misy fipoahana ho an'ny China Jiuquan Satellite Launch Center, China Xichang Satellite. Launch Center sy China Wenchang Satellite Launch Center.
Manatsara hatrany ary miezaha mafy hanangana marika fanta-daza eo amin'ny indostria!
Ny fahombiazana dia avy amin'ny foto-kevitra.Ny ekipan'ny mpitantana an'i Feace dia mifikitra amin'ny filozofia momba ny fandraharahana amin'ny "famelomana indray ny indostria nasionaly, mikatsaka ny kalitao avo indrindra sy ny fiarovana ambony indrindra amin'ny vokatra elektrika tsy misy fipoahana."Ny drafi-drafitra lehibe amin'ny orinasa efa taonjato maro momba ny "sosialy, fitantanana siantifika, fanaparitahana ny indostria, fanatontoloana ny fitantanana, ary iraisam-pirenena ny marika" dia mandroso.
Mampiasà vola 136 tapitrisa yuan hanampiana tany 38 hektara hampiharana ny "Fananganana Ozinina hendry miaraka amin'ny vokatra isan-taona amin'ny fitaovana elektrika 300,000 porofo mipoaka sy jiro tsy misy fipoahana."Mamorona rafitra famokarana marani-tsaina mora miovaova, voatokana manokana ary mifototra amin'ny fampahalalana.Ny tetikasa dia mifanaraka amin'ny politikan'ny fanohanana indostrialy nasionaly "Made in China 2025" izay mifantoka amin'ny famokarana marani-tsaina ary mahatsapa ny indostria 4.0.
Ho setrin'ny fepetra takian'ny fanavaozana ny anjaran'ny governemanta eo an-toerana dia novana tamin'ny fomba ofisialy ho "Feice Explosion-proof Electric Co., Ltd" ny anaran'ny orinasa.
Nampiasaina ny faritra fanorenana vaovao mirefy 17.235.69 metatra toradroa misy fitaovana elektrika tsy misy fipoahana sy atrikasa fanodinana marani-tsaina sy famoriana jiro mitentina 20 tapitrisa yuan.Nahatratra 63.604,26 metatra toradroa ny fitambaran'ny velaran'ny tranon'ny orinasan'ny orinasa.Tamin'ity taona ity, ny orinasa koa dia nangataka ny fikarohana sy ny fampandrosoana teknolojia avo lenta Zhejiang.Neken’ny foibe ary nekena.
Nitombo ho 2016,66 tapitrisa yuan ny renivohitra voasoratra anarana, nahatratra 320 tapitrisa yuan ny fananana raikitra, ary nihoatra ny 400 tapitrisa yuan ny sandan'ny vokatra;
Feice dia nahazo mari-boninahitra toy ny "Nanhu District Patent Demonstration Enterprise", "Top Ten R&D Enterprises in Urban Area", ary "AAA Credit Rating Certificate of China Electrical Appliance Industry".Tamin'io taona io ihany, mba hamenoana ny fepetra takian'ny rafi-pitantanana ny orinasa miaramila amin'ny fampiasana fitaovana elektrika mipoaka, ny orinasa dia nandalo ny fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao nasionaly GJB-9001.
Ny orinasa dia nametraka ny tanjony amin'ny fampandrosoana amin'ny tanjona maharitra amin'ny fanatsarana ny haavon'ny automatique famokarana sy ny fifindrana mankany amin'ny orinasa marani-tsaina.Nanohy ny fampiharana ny tetik'asa fanovana teknolojia manan-tsaina ho an'ny famokarana fitaovana elektrika porofo mipoaka, ary nampiditra ny alemana TRUMPF tamin'ny laser fanapahana foibe, CNC fandavahana sy ny tapping foibe, ary mandeha ho azy fampitana electrostatic famafazana.Ny tsipika fivorian'ny plastika fanasitranana, ny fitaovana famokarana fanariana tsy tapaka ho an'ny tady sealant misy singa roa, sns., dia nampiakatra ny haavon'ny fitaovana famokarana ny orinasa ho amin'ny ambaratonga ambony kokoa.
Feice dia nekena ho orinasa teknolojia avo lenta nasionaly sy orinasa Zhejiang siansa sy teknolojia, ary ny foibe teknolojia orinasa dia nekena ho foibem-pikarohana sy fampivoarana teknolojia avo lenta, ary nomena ny "Zhejiang Famous Trademark" ao amin'ny mitovy. taona;
Mba hanatsarana ny haavon'ny automatique amin'ny famokarana vokatra, aingam-panahy avy amin'ny politikan'ny fanoloana milina ao an-toerana, ny orinasa dia nampihatra ny ampahany voalohany amin'ny fampiasam-bola fitaovana 8 tapitrisa yuan milina fanoloana teknolojia tetikasa fanovana, ary nataony tao amin'ny famokarana ny taona manaraka, izay niteraka mitohy. Ny fahafaha-mamokatra vokatra Misondrotra, mihatsara hatrany ny kalitaon'ny vokatra, ary sambany vao nanandrana ny hamamian'ny famokarana fitaovana mandeha ho azy ny orinasa.
Nahazo ny anaram-boninahitra hoe Orinasa folo ambony indrindra ao amin'ny indostrian'ny fitaovana elektrika porofo mipoaka ao Shina ary orinasa folo tena marin-toetra ao amin'ny indostrian'ny fitaovana elektrika porofo mipoaka ao Shina.
Nampiasaina tamin'ny fomba ofisialy ny Jiaxing Modern Industrial Park, mirefy 80 hektara.Izy io dia manana atrikasa valo ao anatin'izany ny die-casting, welding, injection molding, compression moulding, metalworking, spray moulding, kojakoja elektrika, ary jiro, ary koa ny atrikasa bobongolo ary ivon-toeram-pitsapana elektrika mipoitra.Andian-dahatsary famokarana lehibe.
Nitombo ho 71,66 tapitrisa yuan ny renivohitra voasoratra ao amin'ny orinasa, nahatratra 280 tapitrisa yuan ny fananana raikitra, ary nihoatra ny 220 tapitrisa yuan ny sandan'ny vokatra;
Ny filoha Xu Yuedi dia nokaramaina ho mpikambana ao amin'ny Komitin'ny Teknolojia Nasionaly momba ny Fanabeazana ho an'ny fitaovana elektrika tsy misy fipoahana (SAC/TC9);
Ny orinasa dia notendren'ny China Jiuquan Satellite Launch Center ho mpamatsy kojakoja elektrika tsy misy fipoahana, manome vokatra elektrika avo lenta amin'ny fipoahana ho an'ny fandefasana malefaka ny sambon-danitra misy an'i Shenzhou-7.
Ny sandan'ny famokarana sy ny varotra dia samy nihoatra ny 150 tapitrisa yuan, ary nekena ho iray amin'ireo orinasa elektrika 10 ambony indrindra amin'ny fipoahana baomba nataon'ny China Electrical Equipment Industry Association;
Ny orinasa dia mandrakotra faritra maherin'ny 30 hektara, Beibaixiang New Industrial Production Park ao Yueqing City, ampiasaina;
Ny Birao Nasionaly momba ny kalitao sy ny fanaraha-maso ara-teknika dia nanakarama ny filoha Xu Yuedi ho "mpikambana ao amin'ny komity elektrika tsy misy fipoahana ao amin'ny komity teknika manara-penitra ny fitaovana elektrika tsy misy fipoahana"
Nahazo ny ISO9001 International Quality System Certification.Tamin'ny volana oktobra tamin'io taona io ihany, ny orinasa dia voatondro ho "mpamatsy ambaratonga voalohany" nataon'ny China Petroleum Materials and Equipment (Group) Corporation.
Mba hampiroboroboana ny fampivoarana ny fenitry ny indostrian'ny fipoahana-porofo ao Yueqing, Wenzhou, miaraka amin'ny fanohanana sy fandrindrana ny Birao Fanaraha-maso ara-teknika Yueqing, ny filohan'ny orinasa Xu Yuedi, amin'ny maha-iray amin'ireo mpikarakara, dia nandamina sy nanangana ny Fikambanan'ny Indostria Fipoakan'ny Yueqing. (anarana ankehitriny: Zhejiang Explosion-Proof Electrical Industry) Association) ary niasa ho filoha lefitra.
Ny orinasa dia nandray anjara tamin'ny fipoahana-porofo Electrical Appliances sampana ao amin'ny China Electrical Equipment Industry Association ary voafidy ho ao amin'ny filankevi-pitantanana.Ny filoha Xu Yuedi no tale, tale nijoro ary filoha lefitra nifandimby.
Ny rafi-pitantanan'ny orinasa dia mahafeno ny fepetra takian'ny ISO9001, Rafitra fanamarinana fiarovana azo antoka amin'ny fipoahana (ATEX) ary Rafitra fitantanana ny tontolo iainana ISO14001, Rafitra fitantanana ara-pahasalamana sy fiarovana amin'ny asa, OHSAS18001, China Petrochemical Corporation ary China National Petroleum Corporation (HSE) fahasalamana, fiarovana ary tontolo iainana. fitakiana rafitra fitantanana .
Taratasy fanamarinana orinasa teknolojia avo lenta
Taratasy fanamarinana ho an'ny fametrahana, fikojakojana ary fanamboarana fitaovana tsy misy fipoahana
Ny Vondrona Eropeana ATEX Quality System Certification Certificate
Lefitry ny filoha lefitra
Orinasa tsy miankina integrity
Fanamafisana ny famokarana azo antoka
Certificat de crédit
marika malaza ao amin'ny faritanin'i Zhejiang
1. Tetikasa fanadiovana sy fampidirana simika Sinopec Zhongke Guangdong 2. Tetikasa fanadiovana sy fampidirana simika Sinopec Gulei
3. Zhejiang Petrochemical 40 tapitrisa taonina / taona tetik'asa fanadiovana sy fampidirana simika 4. Hengli 20 tapitrisa taonina/taona tetik'asa fanadiovana sy fampidirana simika
5. Komity foibe PetroChina Jieyang Guangdong Petrochemical 20 tapitrisa taonina fanadiovana sy fampidirana simika 6. Hengyi Brunei Damora Island (PMB) Tetikasa Petrokimia
7. Tetikasa Complex Complex Chemical Gas Natural Amur Sino-Rosiana (AGCC) 8. Tetikasa fampisehoana an'ny Shaanxi Coal Group Yulin Chemical Co., Ltd
9. Shenghong Group Jiangsu Lianyungang 16 tapitrisa taonina/taona tetik'asa fanadiovana sy fampidirana simika 10. Iraka fandefasana ny 4 martsa lava